Hirgelinta doorashooyinka oo aan qoondo loogu darin miisaaniyadda Puntland iyo xukuumadda oo ka jawaabtay? – Kalfadhi
Wasiirka arrimaha gudaha, federaalka iyo dimuqraadiyaynta Puntland mudane Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad ayaa maanta ka hadlay qoondadii la filayay in hirgelinta nidaamka doorashooyinka loogu daro miisaaniyadda saggaalka bilood ee golaha wakiilladu ansixiyeen axaddii hore.
Wuxuu sheegay in ka maqnaashiyaha qoondadaas ee miisaaniyadda ay shaki gelisay daneeyayaasha. Wuxuu muujiyay in xukuumaddu ka warqabto walaaca ay daneeyayaashu ka muujiyeen sida ay xukuumadda cusub dhab uga tahay ugana go’an tahay hirgelinta hannaanka doorashooyin dimuqraadi ah oo si dhaqso ah Puntland uga hirgala.
Mudane Dhabanacad wuxuu sheegay in dowladda cusub oo duruufo badan ku xeernaayeen darteed ay ugu wacnayd in aysan ku soo diyaarin miisaaniyad cusub, taas ayaana dhalisay in ay ku gudubto sidii ay ahayd.
“Mudo aan fogayn bishaan siddeed, hadii alle idmo dib baa loo eegayaa” ayuu yiri Wasiirku. Xukuumadda ayaa agoosto bilaabi doonta diyaarinta miisaaniyadda 2020-ka ee dowladda, taas oo golaha wakiillada la horgeyn doono fadhiga dhici doona Oktobar, sida caadada ahayd.
Wasiirka oo hadal ka jeediyay shir looga hadlayay arrimaha dimuqraadiyadda iyo doorashooyin qof iyo cod ah in ay ka dhacaan Puntland oo maanta Garowe lagu qabtay, wuxuu sheegay in ay ka go’an tahay in la helo shaqooyinkii muhiimka ahaa ee geeddi-socodkaas
Miisaaniyadda baarlamanku ansixiyay 31kii Maarso, 2019 ayaa ahayd tii dowladdu ku shaqaynayay sannadkii hore oo waan waxba laga bedelin, in kastoo doodo badani ka dhasheense baarlamanku aqlabiyad ayuu ku ansixiyay.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo soo xiray Kulankii Golaha ee maanta oo ismari-waa’ kusoo dhamaaday